Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Yaa ma jecla si loo badbaadiyo lacag marka ay suurto gal, gaar ahaan wakhtiga firaaqada? Safrida noqon karaan qaali, laakiin by iibsato tigidhka tareenka aad la Save A Tareen oo qorsheyneysa la inoo yahay caawimaad, idiinka keeno hoos u dhigaan qiimaha. Save the lacag halka la safraya 10 talooyin ku saabsan…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Booqashada gobollada khamri ku Europe waa riyo, waayo, connoisseur khamri kasta. canab ah Stunningly fiican, cimilada diiran oo qoraxdu, hillsides faraxgelinta, iyo cunto fiican u qeexaan, kuwaas oo gobollada top khamri. Haddii aad tahay qof jecel khamriga oo aad rabto inaad aragto Winners-ka ugu Fiican Yurub Iyo Sidee…